Ningbo Liyuan Garment Co, Ltd. eyasungulwa ngo-2003, iyingubo eyenziwe ngogqoke i-OEM & ODM ekhethekile ekhiqizwa izikibha, amaHoodies nezingubo zemfashini. Njengoba sikhule amashumi eminyaka, singumnikazi wendawo yezimboni ezingaphezu kuka-10000 m2 kanye nabasebenzi abanamakhono angaphezu kuka-200 kwi-Ningbo ngemishini esezingeni eliphakeme kanye nabaphathi abasebenzayo.
Futhi sinezinkampani ezimbili ezisekelayo eYangZhou China, eYangon Myanmar. Imikhiqizo yethu ithunyelwa ikakhulukazi eYurophu, e-US, e-Australia naseCanada, futhi ophathina bethu ebhizinisini bafaka izinhlobo zemakethe ezinjengeKmart, iWalmart, Izinhlobo zemfashini ezinjengeZara, nemikhiqizo yemfashini yasemgwaqweni, njenge-Staple ne-Essentials.
Isikhathi sokuthumela: Meyi-22-2020